Somalia: Diyaaradii Muqdisho kusoo dhacday oo Saad u siday AMISOM
Home Somali News Somalia: Diyaaradii Muqdisho kusoo dhacday oo Saad u siday AMISOM
Waxaa socda dhaq dhaqaaq lagu daabulayo Xamuulkii ay siday diyaaradii xalay kusoo dhacday duleedka magaalada Muqdisho ee deegaanka Carbiska.
Diyaaradaani oo nooceedu ahaa Airbus A300 ayaa soo dhacday kadib markii cilad farsamo lasoo daristay uuna shidaalka ka dhamaaday.
Waxaa diyaaradan leh shirkad Masaari ah ee xamuulka [Tristar Air Cargo] waxaana saarnaa 6 shaqaale ah oo u dhashay dalka Masar, kuwaasi oo dhamaantood badbaaday, walow labo kamid ah la sheegay in dhaawacyo fudud soo gaareen.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa ku sugan goobta diyaarada ku dhacday, iyadoo la billaabay in rarka diyaaradaasi laga dajiyo, waxaana si weyn illaalo looga hayaa hawlgalka ka socda deegaanka Carbiska.
Waa markii labaad oo diyaarad Saad Militari u sida ciidamada AMISOM kusoo dhaceyso magaalada Muqdisho, bishii Agoosto ee sanadkii 2013 ayey sidan oo kale diyaarad hub ka keentay dalka Itoobiya ay kusoo dhacday Airporka Magaalada Muqdisho ee Aadan Cade diyaaradaasi oo burbur xoogleh ka dhashay, iyadoo ay ku dhinteen dhamaan shaqaalihii diyaaradaasi saarnaa.
Somaliland: Abwaan Dacar Oo Ka Sheekeeyay Dhibkii Loo Soo Maray Xorriyadii 26-Ka Jun Iyo In Soomaaliya Laga Soo Mustaafuriyay 1959kii